“Maanta Ninka laga Helo Doorashada ee qaata kaasaa reer Somaliland ah, laakiin..” | Somaliland.Org
“Maanta Ninka laga Helo Doorashada ee qaata kaasaa reer Somaliland ah, laakiin..”
December 3, 2012	Hargeysa, (Somaliland.Org)- Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Somaliland Axmed Yuusuf Yaasiin ayaa ku baaqay in hanaanka doorashooyinka dalka wax laga bedelo, waxaanu tilmaamay inay saamayn dhaqaale ay dalka ku yeelanayaan doorashooyinka isdaba jooga.
Axmed Yuusuf Yaasiin oo ka mid ah xubno sharafeedka golaha guurtida Somaliland oo shalay u warramay Telefishanka madaxabanaan ee Bulsho ayaa sheegay in tobankii sanno ee u dambeeyay uu dalku ku jiray doorashooyin, waxaanu ku taliyay in la israaciyo doorashada baarlamaanka iyo madaxtooyada, halka uu xusay in deegaankana gooni lo qabto.
Sidoo kale waxa uu Axmed Yuusuf Yaasiin sheegay in la adkeeyo shuruucda, si aanay xildhibaannadu u noqon qaar u dhuuni doonta dawladda hoose. “Doorashadan saddex xisbi ayaa soo bixi doona, afarta kalena saddexdooda ayay ku kala biirayaan, waxaan leeyahay maanta ninka laga helo doorashada ee qaata go’aankii lagaga helay, kaasaa ah nin reer Somaliland ah, ninka diidaa reer Somaliland maaha waa Somaliland burburinaya.” ayuu yidhi Axmed Yuusuf Yaasiin.
Waxa kale oo uu Madaxweyne ku-xigeenkii hore sheegay inay ina seegtay in xildhibaannada lagu doorto doorka uu bulshada kaga jiro, waxaanu yidhi isagoo arrimahaas ka hadlaya. “Halka keliya ee ina seegtay waxay ahayd xildhibaanka la dooranayo inuu haysto hanti oo aanu dhuuni u doonan doonin dawladda hoose, waana inuu ahaadaa nin wax kusoo kordhiya deegaanka laftiisa, laakiin hadduu yahay nin wax u doonanaya dawladda hoose waa in shuruucda la adkeeyo.”
Ugu dambayntii Axmed Yuusuf Yaasiin waxa uu ku taliyay in hanaanka doorashooyinka wax laga bedelo. “Waxaan leeyahay qaab qaran aynu u doorino, wadankani kuma soconayo sidan, sababtoo ah, 2001-kii waxaynu qabanay codayntii dastuurka, 2002-dii waxaynu qabanay doorashadii deegaanka, 2005-tii waxaynu qabanay doorashadii wakiillada, 2010-kii waxaynu qabanay doorashadii madaxtooyada, maantoo 2012-kiina waa deegaankii.
Waa in talo laga galaa, waa in doorashooyinkan shanti sannadoodba la galaa laba doorasho, ta deegaanka oo gooni ah iyo inta kale oo isku mar ah, sababtoo ah dhaqaale ahaan, anshax ahaan. Diin ahaan , dhaqan ahaan intaba waa ku dhaawac, wadankuna horumari maayo. Anagu waxaanu soo marnay doorashooyin badan, sannad walba waxaad ku jirtaa ijiid aan ku jiidee, wadankii wuxuu ku dhacayaa dhaqaale burbur rasmi ah, maantana qof waliba wuu og yahay. Anigu waan garan karaa, kumaanaan qof ayaa musharaxiin ah, intooda badan ayaa hadhaya, waxaana laga yaabaa inuu nin waliba guri ama dhul iibiyay oo gaadhay inuu qabiilkiisii qaadhaamo.” ayuu yidhi Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Somaliland Axmed Yuusuf Yaasiin oo waramayay Agaasimaha BULSHO TV C/Fataax Ismaaciil Mursal.
Previous PostMagacyadda 21-ka Xildhibaan ee G/Deegaanka BoorameNext PostCabdiraxmaan Cadami oo ka hadlay Qabyooyinka horyaala Golaha deegaanka Hargeysa ee la doortay	Blog